Hieroglyphics hita tany Aostralia dia afaka manoratra indray ny tantara - Afrikhepri Fondation
Hieroglyphics hita any Aostralia dia afaka manoratra indray ny tantara
Ldongona lainga lainga ny angano. Izay rehetra ampianarina ao amin'ny boky momba ny tantaran'ny zanak'olombelona dia tsy mety mandritra izany. Ny tantaran'ny sivilizasiantsika dia be pitsiny kokoa noho ny nitaomana antsika hino. Herinandro vitsivitsy lasa izay, nahita mpikaroka tao amin'ny tranonkala iray any Gosford, tanàna akaikin'ny Sydney, glyphs egyptiana. Hieroglyphics any Aostralia, manitikitika ny saina. Ity ny lahatsoratra milaza an'io zavatra hita io. Tsy mizara ny fehin-kevitry ny mpanoratra aho, izay hitako fa maika loatra. Talohan'ny niantsoana an'i Nina Angelo (OAM), tsy nahalala na inona na inona momba ny hetsi-panoherana manodidina ny faritr'i Kariong (akaikin'i Gosford) na ny ampahany amin'ilay tany dia napetraka teny an-tsena. Indray mandeha tao amin'ilay tranokala, dia nahamarika hazo maro marika sy marika "ho an'ny varotra", tany amin'ny lalana iray lehibe, saingy tsy nahalala ny faritra manontolo, tsy nisy nijanona tamiko. Ny faritany amidy dia trano ho an'ny Glyph Glyphs, any akaikin'i Kariong, manodidina ny 60 km avaratry Sydney. Ity tranonkala ity dia ahitana horonantsary nosoratana tamin'ny fomba "malaza fahiny", izay nasongadin'ny mpikaroka maromaro nanomboka tamin'ny folo taona farany.
Resy lahatra izahay fa ny tena akaiky an'ity tranonkala ity, ary tsy mbola hitan'ny Aborigines izay tsy mbola hitan'ny mason'izy ireo hatramin 'ny nahitana azy vao haingana, dia sehatra rocky misy andiana sarivongana masina misy lanjany lehibe. Tao anatin'io sehatra lehibe io dia nahita trondro, bibilava, feso na trozona goavana, boribory ary karazana sy endrika samihafa.
Izany dia tsy isalasalana fa zavakanto iray malaza fahiny Aborigène rock galerie izay mendrika ny ho voaro. Misy fiainana mirehitra-habeny Durramullan (zanaky ny Fanahy fahariana Biamie) izay tena tsy manan-tsahala, tsy ampoizina sy mazava tanteraka masina, fa ny fanapahan-kevitra tsy maintsy nentina ny fomba hilazana izany ampahibemaso.
Tsy misy na inona na inona eo akaikin'io any an-kafa any Aostralia, ary izany no izy. Izany no zavatra rehetra nanaovanay fanambarana. Ny sary nalaina tamin'ny tolakandro tao amin'io tranonkala io, ary indrindra fa ny an'i Durramullan, dia tsy tokony haverina na am-pamakiana na inona na inona na inona na inona afa-tsy
Noho ny mety hitrangan'io faritany io (nivarotra) ary avy eo dia azo, na inona na inona ny famantarana ho an'ny Glyph Glyphs, dia ilaina ny fomba hafa.
Nanaiky izahay hanangana sehatra fanasokajiana amin'ny alàlan'ny famoahana ireo tranonkala / relika rehetra "hita ao anatin'ny làlam-by 2 km'i Sydney" fa ity fomba ankapobeny ity dia tsy mihatra amin'io toerana io. Ireo sary sokitra sy sehatra mifandraika hafa (misy iray ao anatin'io faritra io) dia efa atahorana mivantana.
Ny elanelana misy eo amin'ity tranonkala miavaka ity sy ny an'ny Glyphs Glyphs dia efa akaiky loatra ka hazavain'ny fifanoherana na ny fanao. Raha manamarina ny maha-azo itokiana an'ity tranonkala Ejiptiana ity, manana tombony isika. Araka ny Dr. Hans-Dieter von Senff, izay nanoratra taratasy fanoratana ao amin'ny tranonkala:
"Tena misy ireo hieroglyphs ireo ary misy ao Aostralia hatramin'ny faran'ny taona 4500. Mba hanaporofoana fa ireo Ejiptiana glyphs X-tsy ny graffiti, araka ny niady hevitra isan-karazany "manam-pahaizana" sy "Egyptologists" fa ny taratasy lalana sisa ny prehistoric olona, ​​voasoratra ao milamina tsara sy mora azo fiteny izay misy dikany foana, na 4500 taona aty aoriana. Ity tany ity dia tsy fandikana, fa ny tena zava-baovao momba ny arkeôlôgy, araka izay ho hitan'ny andiam-balala faharoa hita vao haingana.
Ireo mpitsikera izay miady hevitra ny niandohan'ireny sary sokitra nosoratana tamin'ny 300 ireny dia tsy mahatsiaro tena amin'ny toe-javatra rehetra. Ary raha voaporofo tokoa, no sarin-javatra 'ny Egyptiana, glyphs ireo ho manan-tantara Nihevitra anjara asa lehibe noho ny kely indrindra amin'ny epitaph ny tantara Australian.
Ny soratra nataon'izy ireo dia nadikan 'i Ray Johnson izay milaza fa Proto-egyptiana, ary nanaiky "araka ny didin'ny Talen'ny Jeneraly ao amin'ny Museum Cairo, Dr. Dia' Abu-Ghazi." 
Na izany aza, na eo aza ny fankatoavan'ny manam-pahaizana ao Kairo, ireo manam-pahaizana Aostraliana izay manana fahazoan-dàlana tsy dia mahazatra dia mahatsiaro fa fahadisoam-panantenana izany.
Ny toerana dia ahitana sarin-javatra voasokitra Ankh (jereo ny sary etsy ambony - Steve Strong nahazoan-dalana), tena ilaina firavaka Thoth, nametraka ny dian-tongotra eny amin'ny Ibis (biby mitovy ny Thoth) sy ny zavatra mino ny ho "reniranon'ny fiainana". Nisy roa lahy Ibis sarin-javatra ao amin'ny vatolampy, na amin'ny mombamomba ny lohan'ny iray Ibis sy ny vatana ny olombelona, ​​toa an'i Jeremia ny mitovy foto-kevitra Ejipta fahiny.
Ny tena nahagaga anay dia tsy hoe ny fifandraisana fotsiny ihany teo amin'ny ibis sy i Thoth, fa i Thot tany am-piandohana kosa dia aseho ho toy ny virosy. Ary ity dia tranga antitra indrindra izay hita indroa eto Aostralia, izay mampivelatra be ny haavony.
A sarivongana hita ao Gympie, mba hanao ny asan'ny heverina iray amin'ireo dimy mpiambina niambina ny piramida ny dingana fito ny Gympie, dia ny fanehoana ny Toth amin'ny endrika fototra indrindra simian ary efa niolomay Niadian-kevitra ary matetika baraka.
Ny fahitana vao haingana ny sary sokitra nataon'i Durramullan, ary koa ao amin'ny profil, dia ambany noho ny adihevitra. Ny lava lava sy lava mipoitra no manondro ny baboon na ny rindrina lehibe, izay miseho tanteraka ao anatin'ny toe-javatra, satria ny fototeny dia eo amin'ny kaontinanta iray tsy misy monkey, na kely na lehibe.
Ny sary sokitra dia efa tranainy, nosoratan'ny mpanakanto malaza iray amin'ny biby Afrikana sy ny andriamanitra Ejiptiana, izay tokony ho fantatra talohan'ny fanafihan'ny Anglisy. Ary ny hanampy ny toetra sy be io hazo fijaliana-kolontsaina fiaraha-miasa, dia misy roa karazana ny Aboriginal soratra voasokitra, ny iray misy litera 31 olona hanavaka sy miavaka ary ny iray kosa 5 3 silhouettes izay manana vatana, ary inona no toa crocodile heads.
Noho izany antony izany sy ny maro hafa dia manaiky tanteraka an'i Robert Lawlor, mpanoratra ny tonon'ny "Voices of the first day" izay heverina ho liana tahaka izao.
"Ny Ejiptiana fanao ara-pivavahana, ny Pantheon ny zoomorphic andriamanitra, ny foto-kevitra ny fahafatesana sy ny fahaterahana indray, filalaovana ody, mazia sy ny fanafody rehetra miorim-paka ao am-boalohany kolontsaina ny andro voalohany (Voalohany Day)" 
Hitantsika ny fisian'ny Ejipsiana tany Aostralia nanomboka tamin'ny taona 5000. Raha mifanaraka tanteraka amin'ny tantaran'izao tontolo izao izay, noho ny antony samihafa dia sarotra ny miresaka eto, ireo tantsambo sy ireo mpikaroka Aborigines, mba hiverina any Aostralia amin'ny herintaona ihany.
Mino isika fa ny glyphs sy ny Egyptiana dia mijanona ho hita "ao amin'ny 2 ora ao Sydney" mampiseho ny sabatika ara-panahy any amin'ny tany izay fivavahana sy kolontsaina Ejiptiana nanomboka.
Fa ny Glyph Glyphs dia akaiky ny toerana masina, Durramullan, dia manolotra fifanarahana eo amin'ireo Aostraliana voalohany sy vahoaka iray ao amin'ny kaontinanta lavitra. Ny sehatry ny Durramullan dia tsy azo lavina manokana ary ny Glyphs dia ampahany manan-danja amin'io rafitra miavaka io, tsy any Aostralia fa manerana izao tontolo izao koa.
Ny sary sokitra sy ny krypta Ejiptiana, natokana ho fahatsiarovana ny zanak'i Farao, dia naorina teo akaikin'ny sehatry ny rock Durramullan ary tsy azo tanterahana afa-tsy ny faneken'ny Aborigines eo an-toerana.
Mazava ho azy fa raha ny Tompon-tany aostralianina Nandeha-tany handeha an-tsambo tamin'ny andro fahiny, ity diany dia tsy vita, tany Aostralia seagoing asa tanana. Tamin'ny an-tampon'ny ny fihaonana an-tampony dia sarin-javatra maro ny sary hoso-doko ny sambo, izay diso ny filazana fa avy amin'ny sambo mpanjono miaraka amin'ireo mpihaza Macassan izy ireo.
Ny fanambarana toy izany dia tsy azo atao raha ny momba ny sambon-danitra nohavaozina hita tany amin'ny faritra avaratr'i Gosford. Ny sarin'ny sambokely, miaraka amin'ny tsipìka sy ny lamosin'ny rivotra, dia manana ny asany voalohany: ny mandeha lavitra amin'ny onja avo.
Ny fananganana sambo iray amin'ny endrika sy ny tarehimarika voasokitra ao amin'ny vatolampy dia fandaniam-potoana, ezaka ary loharano, raha niondrana an-kalamanjana ny sambo. Ny zava-dehibe indrindra, ity sary sokitra ity dia manome anjara betsaka amin'ny fananganana ny filazan'i Ramindjeri Elders.
Raha, raha ny marina, rehefa manizingizina izy ireo fa ny razamben'izy ireo dia nanodidina ny tany, dia tao amin'ny fig-X.8 io tanjona io dia mety ho tanteraka io tanjona io.
Ity sary hosodoko sy ny kaontin'i Ramindjeri ity dia manome valiny momba ireo fanontaniana tsy voavaha, izay tsy afaka mankasitraka ny oniversite. Ny nomerao 35 an'ny gazetin'ny Cosmos resin'ny haino aman-jery natsangana indrindra dia mifantoka amin'ny fisian'ireo vahoaka Aborigène any Aostralia.
Ny pejin 'ny cover dia nahitana ireto tantara manaraka ireto:
"Nahita an'i Amerika ve ny Aborigines? Nahita zava-baovao mahavariana fa ireo tonga voalohany tany Amerika Atsimo dia tonga tamin'ny 11 000 taona lasa izay "
Mazava ho azy fa fiatoana fotsiny i Amerika rehefa nandeha an-dranomasina ny Aostraliana voalohany.
"Dr. Raghavendra sy ny mpikaroka tohanan'ny governemanta Indiana ao India anthropological fisafoana tetikasa hita fa tsy manan-tsahala ny fiovan'ny fototarazony fototarazo no nozaraina teo anivon 'ny Indiana ny ankehitriny sy ny teratany." 
Izy ireo dia "namantatra vahoaka 7, avy amin'ny foko Dravidian an'ny Indre Centre ho an'ireo Aostro-Aziatika mizara ny toetra maha-genônika izay tsy hita afa-tsy any amin'ireo Aborigines. "
Ireo zava-misy ireo, ary koa ireo zava-baovao vaovao momba ny fifandraisana siantifika Aostralianina miaraka amin'ny hominid any Siberia izay antsoina hoe Denosovan, dia mitaky fitaovam-pitaterana: sambo.
Na izany aza, ny tetikasa sambo dia tsy ny zava-drehetra. Ilaina ihany koa ny fitaovana na fitaovana ho an'ny fanorenana sambo toy izany sy ny teknikan'ny fiaramanidina alohan'ny hidirana ao India, Amerika, Azia, Ejipta na any amin'ny toerana hafa. Ny famaky dia fitsipika iray manan-danja amin'ny fananganana sambo iray izay afaka mandeha amin'ny ranomasina.
Raha jerena ireo rehetra ireo, dia tsy tokony hahagaga raha hita ao amin'ny Sahul (ny kontinanta lehibe indrindra any Aostralia izay ahitana PNG, Tasmania, sns ...) ireo famaky tranainy indrindra hita ...)
Ny famaky mafy dia hita tao Huon Terrace (PNG) ary natomboka tamin'ny 40 000 taona. Nahomby tamin'ny famaky iray hita tany Jawoyn Land (NT) izy, izay nanambara fa taona 35 000 taona. Any Aostralia, nisy famaky hafa hita tany Sandy Creek (QLD, taona: 32 000 taona) ary iray hafa tao Malangangerr (NT 23,000 taona).
Amin'ny fanamafisana ny fahanton'ny teknolojia famaky, sy ny fampiraisana, ny an'ny sambo, i Angel John Gallard dia manana helikoptera tanana (ilay mpialoha lalana ny famaky), izay inoany fa daty tsy latsa-danja noho ny 60 taona, miaraka amin'ny tena mety 000 100 taona mahery). Ny famaky tranainy indrindra hita tany ivelan'i Aostralia dia hita tao amin'ny Cave Niah (Sarawak) ary tombanana ho 000 15 taona ny fanombohany.
Ho an'ity diany ity, indrindra amin'ny fandehanana manerantany amin'ny dian-tongotra valo amin'ny lalana, ny tantsaha Aborigènes dia tsy maintsy nifantoka tamin'ny kintana. Manomboka eto indray ny zavatra rehetra manomboka eto. Araka ny nambaran'ny ekipa mpahay siansa iray ao amin'ny CSIRO, dia hita ao Wurdi Youang (Victoria) ny tranobe tranainy indrindra momba ny astronomia. Ny "fandaharana hafahafa vato" dia manana "teboka roa mampifanaraka tsara ny masoandro amin'ny faran'ny lohataona". , 
Ny manam-pahaizana avy amin'ny CSIRO dia mino fa "ny sundial Aborigin taloha dia mety mihoatra ny 10 000 taona" 
Tsy mijoro irery ireo vatolampy ireo - rindrina roa vao hita tany an-tendrombohitra (Tendrombohitr'i Snowy), ny voalohany natsangana Atsinanana-Andrefana dia manamarika ny fifangaroan'ny planeta ary misy vato tsy latsaky ny 10. Ny rindrina faharoa dia farafahakeliny efatra habe raha kely indrindra ary midina hantsana iray mideza be.
Ny "2 ora avy any Sydney" dia sehatry mifanaraka tsara 5 vato ary ny iray trano enigmatic kokoa nefa, noho ny antony mazava antsointsika hoe 'mini-Stonehenge. Izany dia ahitana 46 vato ao amin'ny faribolana anatiny sy 18 namorona ny zavatra tsapantsika ho kintana sampahom-boaloboka.
Ireo lalana efatra dia misy marika maromaro misy vato marindrano notohanan'ny vato. Ny fanorenana efatra, na dia voasarin'ny kilometatra an-jatony aza, dia manatanteraka tanjona iray ihany: mametraka sarintanin'ny lanitra.
Misy antony manosika ireo tranonkala ireo izay toa manohitra mivandravandra ny firongatry ny zavakanto izay heverintsika fa nahavita tsara nanerana an'i Aostralia. Izany no ninoanay fa ny zavakanto nentin-drazana nentim-paharazana dia ny faritra. Tao anatin'ity faritra ity no nahitantsika styles / teknika 25, maro amin'izy ireo no nihevitra fa ny fananganana sehatra foko tokana.
Hitantsika ny porofo manamarika ireto karazana artista manaraka ireto: Panaramitee; X-Ray; an'ohatra; Mimi; Rahalahy Rahtava; Wandjina; Papunya; Tora-tanana tanana (karazany roa); Representational; sary sokitra; Rock Pecking; Stone arrangements; Bands manerana ny vatana; Sary famantarana Ejiptiana; Driaka; Sarin-dabozia voasaron-tava (hita tany Aostralia); Fanambadiana fanahy; ary ny hafa izay tsy hitantsika. -
Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any amin'ny http://humansarefree.com
Aiza no hitondra antsika? hiantehitra fotsiny amin'ny boky sy ny academics "misafotofoto sy mikorontan-tsaina ..." Na misy lalana hafa. Mino izahay fa nisaraka tamin'ny Afrikana ny Aostraliana Voalohany ary izy ireo no homo sapien sapiens voalohany.
Izany no Aostralia, fa tsy ny Africa izay hatramin'ny voalohany sy ny fifindra-monina avy any Aostralia, ny fivavahana, fitovian-jo, ny astronomia, alevina, mandeha sambo, mozika , ny zavakanto, ny demokrasia sy ny fikarohana rehetra nanomboka ny mendri-kaja.
Ary, any Aostralia, indrindra fa ny faritra manodidina ny ora 2 ao Sydney, dia mbola hita ihany ny porofon'ity izao tontolo izao ity.
Nosoratan'i Steve Strong, New Dawn Magazine; | Azafady mba tsidiho ny tranonkalan'i Wayne Herschel ho an'ny fandikany ny hieroglyphs Egypte an'ny Australia;
Geneva, ny 10 May 2014 Nicole V. Joseph
fanamarihana ambany pejy:
1. "Ny Kariong Glyphs ary ny Egyptiana Voarara: fikarohana manaporofo ny Kariong Glyphs mba ho tena, ary mampiharihary ny mpanao tsikera manana Hoaxters" ny Hans-Dieter of Senff, 2011, 99.
2. Voices of the First Day: Robert Lawlor, tranonkala iraisam-pirenena, Ltd., 1991, fifohazana ao amin'ny Dream Dream Aboriginal.
3. "Odyssey taloha" nataon'i Jacqui Hayes, Cosmos, 2010, Front Cover.
4. "Ny Aostraliana Voalohany dia Indiana: Fikarohana," Sydney Morning Herald, 23 Jolay 2009, 16.
6. "Wurdi Youang Rocks afaka manaporofo teratany Ireo astronoma voalohany," 5 Febroary 2011, www.news.com.au/technology/sci-tech/ancient-aboriginal-eyes-were-on-the-skies/story-fn5fsgyc-1226000523978
Raha nankasitraka an'ity lahatsoratra ity ianao dia miangavy anao handinika famandrihana nomerika amin'ny New Dawn. - Jereo bebe kokoa amin'ny: http://humansarefree.com/2014/03/ancient-egyptian-glyphs-found-in.html?m=0#sthash.MqmCZOjo.GvmN4EEd.dpuf
Navoakan'i Béni Nsemi
Trailers - Sarimihetsika hojerena (Lahatsary)
Ireto olona manapoizina ny fisiantsika (Audio)